You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Anatomy / Uterine Fibroids
Uterine Fibroids ခေါ် သားအိမ် အသားလုုံး များ -------
သားအိမ် အသားလုုံး များ ဟာ အမျိုးသမီး တော် တော် များ များ မှာ ဖြစ် လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
အကြမ်း အား ဖြင့် 70% သော အမျိုး သမီး တွေ မှာ ရှိ တတ် ပါ တယ်။
များ သော အား ဖြင့် ကင်ဆာ မဟုုတ် တာ များ ပါ တယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ် တာ ရှိ နိုုင် ပေ မဲ့ အလွန် ဖြစ် ခဲ ပါ တယ်။ ( leiomyosarcoma )
Fibroid ရှိ ရင် အောက် ဖော် ပြ ပါ လက္ခဏာ များ ရှိ တတ် ပါ တယ်။
၁. ရာသီ လာ တဲ့ အ ခါ အလွန် များတတ် ပါ တယ။်
၂. ရာသီ လာ သည် ဖြစ် စေ၊ မလာ သည့် အ ချိန် ဖြစ် စေ ဆီးခုုံ၊သားအိမ် နေ ရာ မှာ နာ အောင့် တတ် ပါ တယ်။
၃. ခါး နာ တတ် ပါ တယ်။
၄. ဆီး ခဏခဏ သွား တတ် ပါ တယ်။
၅. ကိုုယ်ဝန် ရှိ လာ ဖိုု့ လဲ ခက်ခဲ တတ် ပါ တယ်။
၆. ကိုုယ်ဝန် ရှိ လာ ပြန် ရင် လဲ ဒီ အလုုံး တွေ ဟာ ဟော် မုုန်း ဓာတ် တွေ ကြောင့် ကြီး လာ တတ် ပါ တယ်။
၇. အချို့ လူ တွေ မှာ ဒီ အလုုံးတွေ ရှိ ပေ မဲ့ ဘာ လက္ခဏာ မှ မပြ တာ လဲ ရှိ ပါ တယ်။
၈. သွေး ဆုုံး သွား ပြီး ရင် သူ တိုု့ တွေ က ရှုံ့ ကုုန် ပါ တယ်။
ဘာ ကြောင့် ဖြစ် ရ တာလဲ ဆိုု တာ မည် သူ မျှ သေသေချာချာ မသိ ပါ။
သိုု့ ပါ သော် လည်း ၊ အကြောင်း မရှိ တဲ့ အကျိုး ဆိုု တာ မရှိ တာ မိုု့၊ အ ကြောင်း က ရှိ ကိုု ရှိ ပါ တယ်။ မသိကြ သေး တာ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။
ကျွန်မ စဉ်းစား တာ က တော့ ၊ သား အိမ် အလုုံး တွေ ဟာ လည်း ရုုပ် တရား တွေ ဖြစ် တာ မိုု့၊ ကံ၊စိတ်၊ဥတုု၊အာဟာရ နဲ့ ဘဲ ပြန် ထောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ မမှား နိုုင် ဘူ လိုု့ ထင် ပါ တယ်။
ဒီ နေရာ မှာ ကံ နဲ့ စိတ် က နာမ် အ ကြောင်း တရား ဆိုု တော့ ခဏ ထား လိုုက် ပြီး၊ ရုုပ် အကြောင်း တရား ဖြစ် တဲ့ ဥတုု နဲ့ အာဟာရ ကိုု ပြန် ထောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
တစ်နည်း နဲ့ လှည့် ပြော ရ ရင် ဥတုု နဲ့၊ အာဟာရ ကိုု ပြင် ပေး လိုုက် မဲ့ ဆိုု ရင် အများ ကြီး ဖြစ် နိုုင် စရာ အ ကြောင်း ရှိ ပါ တယ်။
ကျွန်မ အနေ နဲ့ က တော့ ကျေးဇူး တော် ရှင် မြတ်စွာဘုုရား ကိုု အကြွင်း မဲ့ ယုုံ ကြည် တာ မိုု့၊ ဒီ အယူ အဆ ဟာ အမှန် လိုု့ နှလုုံး သွင်း ထား ပါ တယ်။
ဒီ သားအိမ် အလုုံး တွေ ရှိ တာ သိ သူ တွေ ဘာ လုုပ် ဖိုု့ လိုု ပါ သလဲ?
၁။ နာကျင် ခြင်း လဲ မရှိ၊ ရာသီ လာ ရင် လဲ ဒုုက္ခ မ ပေး ဘူး ဆိုု ရင် ဘာ မှ လုုပ် စရာ မ လိုု ပါ။ အချို့ သူ များ မှ ultrasound မှာ ပေါ် လိုု့ ဆရာဝန် က ခွဲ ရ မယ် ဆိုု တိုုင်း ခွဲ စရာ မ လိုု ပါ။
၂. ရာ သီ အများ ကြီး လာ နေ တယ် ဆိုု ရင် submucous fibroid ( သားအိမ် အတွင်း lining ) မှာ မရှိ တဲ့ သူ တွေ မှာ ဆိုု ရင် ရာသီ များ တာ ဟာ fibroid ကြောင့် မ ဟုုတ် နိုုင် ပါ။
အမျိုးသမီး တွေ မှာ ရာသီ များ ရ ခြင်း ရဲ့ အထင် ရှား ဆုုံး အကြောင်း က တော့ hypothyroid ခေါ် thyroid hormone နည်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ လိုု ဖြစ် နေ တာ ကိုု ထိန်း ပေး လိုုက် ရင် ရာသီ လာ တာ ပြန် ကောင်း သွား ပါ လိမ့် မယ်။
အခုု ခေတ် က ဘာ မ ဆိုု ခွဲ မယ် ဆိုု ပြီး ခေတ် ဖြစ် နေ ပါ တယ်။
၃. အရမ်း နာ နေ တယ် ဆိုု ရင် ခွဲ သင့် ရင် လည်း ခွဲ ရ မှာ ပေါ့။
၄. အချိန် တိုု အတွင်း မှာ သိသိ သာသာ ကြီး ထွား လာ တယ် ဆိုု ရင် လည်း ခွဲ သင့် ရင် လဲ ခွဲ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ခွဲ စိတ် တာ နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ --
၁. အချို့ ဆရာဝန် တွေ က Laparoscopic surgery ကိုု အား ပေး တတ် ပါ တယ်
ဒီ နေ ရာ မှာ ခွဲ ပေးမဲ့ ဆရာဝန် က အလွန် ကျွမ်း ကျင် ရင် တော့ မဆိုုး ပါ ဘူး။
မကျွမ်း ကျင် တဲ့ ဆရာဝန် နဲ့ ခွဲ မိ ရင် complications များ ပါ တယ်။
သွေး တွေ သွန် ပြီး သွေး သွင်း ရ တတ် ပါ တယ်။
ခွဲ စိတ် ချိန် လဲ ပိုု ကြာ ပါ တယ်။
မေ့ဆေး ရ တဲ့ အချိန် လဲ ပိုု ကြာ ပါ တယ်။
complication ဝင် ပြီး အ ရေး ပေါ် ဗိုုက် ဖွင့် ရ တတ် တဲ့ အခါ လည်း ရှိ တတ် ပါ တယ်။
အဲ ဒီ အခါ ကြ ရင် Laparoscopic အခ ကြေး ငွေ ရော၊ ဗိုုက် ဖွင့် ရ လိုု့ အခကြေး ငွေ ရော နှစ် မျိုး လုုံး ကိုု ဆေး ရုုံ က လူ နာ ကိုု အခ ဆောင် ခိုုင်း လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ ခွဲ ခန်း စရိတ် အလွန် များ သွား ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ဒါ ကိုု ကြို ပြီး မသိ ထား ရင် ငွေ ရှင်း ရ တဲ့ အခါ သိရ ပါ လိမ့် မယ်။
Laparoscopic surgery ဟာ လူ တွေ ကိုု ကြိုက် စေ တဲ့ အချက် က တော့ ခွဲ တဲ့ ဓား ရာ မကြီး မား တဲ့ အ တွက် မြန် မြန် အလုုပ် ပြန် ဆင်း နိုုင် တယ် ဆိုု တဲ့ အချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
မှန် သင့် သ လောက် မှန် ပါ တယ်။
ရိုုးရိုုး ခွဲ တာ က တော့ အချိန် ပိုု ယူ ရ တာ မှန် ပါ တယ်.။
၂-၃ ရက် လောက် ပါ ဘဲ။ တ ဖြေး ဖြေး သိသိသာသာ ကြီး သက် လာ တာ ကိုု မြင် ရ ပါ တယ်။
Laparoscopic ဖြစ် ဖြစ်၊ရိုုးရိုုး ခွဲ တာ ဖြစ် ဖြစ် မေ့ ဆေး ပေး ခံ ရ တာ တစ် ကြောင်း၊ ခွဲ ခံ ရ တဲ့ ဒဏ် ကြောင့် တစ် ကြောင်း ခွဲ ပြီး ခါ စ မှာ လူ က နွမ်း လျ နေ ပြီး အလုုပ် လဲ ချက်ချင်း ပြန် မ သွား နိုုင် ပါ။
နောက် မ ဆုုံး မ တော့ ကိုုယ့် ကိုု ခွဲ ပေး မဲ့ ဆရာ ဝန် ရဲ့ experience က အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။
အရေး ကြီး တဲ့ အချက် တစ် ခုု ပြော ပြ ပါ ဦး မည်။
ကင်ဆာ ဖြစ် နှုံး က အ လွန် နည်း ပေ မဲ့ အချို့ ကံ ဆိုုး သူ တွေ မှာ ကင်ဆာ ဖြစ် နေ တာ လဲ ရှိ ပါ တယ်။
ဒီ အခါ မျိုး မှာ Laparoscopic surgery အထူး သဖြင့် uterine morcellation ( သား အိမ် အလုုံး ကိုု ခြေ တဲ့ စက် နဲ့ ခြေ ပြစ် ခြင်း) လုုပ် တဲ့ အခါ ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ပျံ့ နှံ့ ကုုန် ပြီး နဂိုု က မရှိ် တဲ့ အဆင့် ၄ ဖြစ် သွား တတ် ပါ တယ်။
လွန် ခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ် လောက် တုုန်း က ဆရာဝန် မ တစ် ယောက် ရဲ့ ဖြစ် ရပ် ပါ။ သူမ က ခွဲ ပေး တဲ့ ဆရာဝန် တွေ ကိုု တရားစွဲ နေ ပါ တယ်။ အခုု ဒီ စက် လဲ USA မှာ သုုံး ခွင့် မ ရှိ တော့ ပါ။
ဘယ် လိုု ခွဲ ချင် တယ် ဆိုု တာ
မိမိ ကိုုယ် ပိုုင် ဉာဏ် နဲ့ စဉ်းစား ပြီး လုုပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခုု ခေတ် က procedure oriented ဖြစ် နေ ကြ တာ များ လိုု့ ဗဟုုသုုတ ရှိ ထား မယ် ဆိုု ရင် မိမိ ကိုုယ် ကိုု ကောင်း စွာ ထမ်း ဆောင် နိုုင် မယ် လိုု့ ထင် ပါ တယ်။